Barlamaank Somaaliya Archives - BaravaNewsBaravaNews
You are here: Home / Tag Archives: Barlamaank Somaaliya
Tag Archives: Barlamaank Somaaliya
Guddoomiyaha Maxkamada sare : Waa sharci daro xil ka qaadista leygu sameeyay
Prof. Jawaari oo beeniyay in uu maanta is hortaagay kulankii ay yeelan lahaaayeen xildhibaanada Golaha Shacabka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Cismaan Jawaari oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in ciidamo isaga taabacsan maanta xoog kula wareegeen xarunta Golaha Shacabka.
“Waxaan idin weydiinayaa 11 askari oo dhar cad ah meel lagu qabsan karaa, Jawaari ayaa qabsaday Xarunta Golaha Shacabka waxay la mid tahay, madaxweynaha ayaa qabsaday Villa Soomaalia, maxaa yeelay xarunta Golaha Shacabka Anigaa ka taliya” ayuu yiri Jawaari oo intaas ku daray in wararka sheegaya in uu qabsaday xarunta Baarlamanka ay yihiin kuwo ay faafiyeen xildhibaanada isaga horjeeda.
Jawaari oo soo hadal qaaday eedeyn uga timid taliyayaasha ciidamada ayaa sheegay in taliyeyaasha uu saaran yahay culeys kaga imanaya Xukuumada, ayna mudan yihiin in loo dulqaato, wuxuuna xusay in uu dhowr jeer kala hadlay iney arimaha siyaasada faraha kala baxaan.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad C/wali Muudeey iyo xildhibaano badan ayaa ku eedeeyey gudoomiye Jawaari iyo ku xigeenkiisa labaad Mahad Cawad in ay maanta xoog kula wareegeen xarunta Golaha Shacabka islamarkaana ay tahay in tallaabo laga qaado.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Prof Maxamed Cismaan Jawaari oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha uu ku guuldareystay in uu dhaxdhaxaadiyo dhinacyada uu khilaafku u dhaxeeyo ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Jawaari ayaa sheegay in halkii uu ka filayay madaxweynaha in uu arintan soo dhaxgalay qaab odeytimo uu isaga ka dalbaday in uu is casilo, taasoo ah ayuu yiri arin gardaro ah.
‘’Madaxweynaha waa uu ku guuldreystay in dhaxdhaxaadiyo dhinacyada is khilaafsan ee Golaha Shacabka, waxey aheyd in sharciga la raaco ama arintan loo galo qaab odey-nimo ah, laakiin ma fileyn in Anniga la ii soo jeediyo in is casilo ‘’ ayuu yiri Prof Jawaari.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayuu ku eedeeyay Prof Jawaari in uusan dhaxdhaaxaad ka aheyn khilaafka u dhaxeeya labada dhinac, isaga oo sheegay in uu fasaxay qabashada kulanka maalinta Berri ah, halkii loo baahnaa in uu ku soo afjaro khilaafka labada garab muddo 10 cisho ah.
‘’Bulshada Soomaaliyeed waxaa ogeysiineynaa in madaxweynuhu uusan dhaxdhaxaad ka aheyn khilaafka Baarlamaanka, isaga oo fasaxay in kulanka maalinta Berri ah uu dhaco, guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaa ku wargalineynaa in wixii cawaaqib ah oo ka dhasha kulanka maalinta Berri ah uu qaadi doono mas’uuliyadeeda madaxweynaha Soomaaliya.
Xukuumadda Soomaaliya ayuu sheegay in ay gabtay waajibaadkeedii shaqo ee loo idmaday sidaa daraadeed loo baahan yahay ayuu yiri in ay meesha ka baxdo.
“Waa qariib in Xukuumadda ay dhahdo lama shaqeyn karno Guddoonka Baarlamaanka, inaan ayaga u shaqeeyo miyay rabaan, waxaa rabaa in aan qeexo arrin dastuuri ah anaga uma joogno inaan u shaqeyno Xukuumadda, wada shaqeyn ayaa naga dhaxeyso, aniga is casili maayo, iyada ha is casisho”ayuu yiri guddoomiye Jawaari.
Guddoomiye Golaha Shacabka aya kulanka maalinta Berri ah ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Shirka jaraa’id ee guddoomiyaha ayaa muujinaya in ay meesha baxday waan-waantii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dhax waday dhinacyada iska soo horjeeda ee golaha Shacabka.
Wasiir Khadiija : Weli mooshinka waa sharci waxaana loo gudbinayaa Golaha Baarlamaanka Somaaliya
Aqalka Baarlamaankii hore ee Soomaaliya oo dib cusboosin lagu sameynayo $100 million doolar
Total Hits : 98557